Zamzar Alternative: Faster, Ọ dịghị File Size mmachi, More Formats
> Resource> Alternatives> Nweta Best Zamzar Alternative
Zamzar bụ a free online video Ntụgharị na video Downloader-ekwe ka ị iji tọghata na ibudata videos enweghị wụnye a software na kọmputa gị. Ọ nwere nzọụkwụ-site-nzọụkwụ igbe ka ị na mfe ịrụcha akakabarede usoro.
Otú ọ dị, ọrụ ka nwere ụfọdụ nchegbu maka Zamzar. N'ihi na converting videos, i nwere ike dị tọghata a faịlụ erughị 100 MB. Maka nbudata videos, ọ na-adịghị akwado ibudata vidiyo si na YouTube. Ndị a bụ 2 isi njọ nke Zamzar, na-eme ọtụtụ ndị ọrụ na-agbalị anya maka a Zamzar ọzọ ka imeta mma video akakabarede na nbudata.
Ihe nke a Zamzar Alternative karịrị echiche
Achọ a Zamzar ọzọ? Ị na-nri ebe. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ gị nhọrọ kasị mma. Dị ka a na desktọọpụ software, ọ bụ ike nke converting videos, nbudata videos, edezi videos na-ere ọkụ DVD. Dị nnọọ ibudata ya na akakabarede ga-eme n'ime nanị ole na ole clicks.
Lee ndị top 7 uru na Wondershare Video Converter Ultimate nwere ihe karịrị Zamzar. Biko gụọ n'okpuru iji nweta nkọwa ndị ọzọ.
1. Input file size akwado: Wondershare nwere ike tọghata faịlụ na-enweghị mmachi. Mgbe, Zamzar naanị akwado converting faịlụ ruo 100 MB.
2. mmepụta video formats: Wondershare atọghata gaa ọzọ video formats, dị ka 3D video formats (3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video), HD video formats (HD MKV, HD TS, HD TRP, HD AVI , HD MP4, HD mpg, HD WMV, HD MOV).
3. Nchigharị ọsọ: Wondershare akwado ogbe akakabarede na ọ na-atọghata na 30x ngwa ngwa ọsọ karịa ihe ọ bụla tọghata. Zamzar ga na-eri awa maka dị nnọọ converting a faịlụ erughị 100 MB.
4. Download videos: Wondershare akwado converting video si ọtụtụ ewu ewu video nkekọrịta saịtị, dị ka YouTube, Facebook, Metacafe, Dailymotion, ezumike, Vimeo, Vevo, BlipTV, AOL Video na wdg mgbe Zamzar anaghị akwado converting faịlụ site na YouTube.
5. Dezie videos: Wondershare akwado edezi vidiyo site trimming, cropping, na-agbakwunye watermark ma ọ bụ sobtaitel iji hazie gị video, mgbe Zamzar adịghị akwado.
6. Ọkụ videos: Wondershare-ahapụ gị Ọkụ video ka DVD diski, DVD nchekwa, ma ọ bụ iji ISO faịlụ, mgbe Zamzar adịghị akwado.
7. Nkwado System: Wondershare bụ dakọtara na ma Windows (Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7, na Windows 8) na Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6). Zamzar bụ ihe online otu.
Olee otú iji tọghata na Alternative ka Zamzar
Iji tọghata na Wondershare Video Converter Ultimate, ị dị nnọọ mkpa 3 nzọụkwụ. Ihe ndị mfe na mfe!
Nzọụkwụ 1: Tinye video faịlụ n'ime a software site Dọrọ na dobe.
Nzọụkwụ 2: Nịm video usoro ị chọrọ iji tọghata.
Nzọụkwụ 3: Pịa "tọghata" button na nri ala nke software interface.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ a ọzọ dị ike na elu video Ntụgharị. Na nke a software, gị nchegbu banyere faịlụ mmachi na akakabarede ọsọ ga-ewepụ. Ọzọkwa ị nwere ike tọghata video ọtụtụ video formats. Donwloading vidiyo si na YouTube ga-abụ dị. E wezụga, video edezi na DVD ọkụ ga-adị mfe karịa Zamzar. Ọ bụ site ugbu a kasị mma Zamzar ọzọ na ị gaghị na-atụ uche.
Top 10 Linux Alternatives ka Adobe Premiere
Jaksta Alternative: Download Online Video mma karịa Jaksta
Winamp mechisịrị ọnụ ala. Get Best Alternative.